Zụlite ụdị nhọrọ eji achọ ihe mma - G --Ọ! ECTlọ akwụkwọ (1 GRAD A-STREAM (2A) // CAMPUS PLANTINE)
EGO NA-EGO NA-EGO - EGO
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Nkwa nke izizi > OGWU EGO NA-EKWU EGO
Ọzụzụ Nchọpụta Learning + (A-current) from GO! Lọ akwụkwọ nlegharị anya, campus Plantin
Na nhọrọ 2A Asụsụ Asụsụ na Sayensị Ọhụrụ sayensị na asụsụ jikọrọ ọnụ. Nke a dị n'ime onodu Omenala Asụsụ na Mmụta Sayensị.
Ga-etinyekwa usoro nke nyocha sayensị na nyocha nke ‘asụsụ’. Nke a na - eme ka njikọ dị n’etiti ngalaba ndị a bụrụ ihe siri ike. I tunyere asusu nke gi (ulo) dika ‘sisitemu’, kama o sitere ‘n’ezi ihe’ na asusu ndi ozo. N'ụzọ dị otu a ị mepụtara nghọta ka ukwuu gbasara ihe jikọtara asụsụ na ọdịbendị.
Kedu ihe bụ isi nhọrọ?
Na Afọ 1e ị ga-enweta agụmakwụkwọ izizi agụmakwụkwọ. Site na Afọ 2e ị ka nwere ọtụtụ agụmakwụkwọ bụ isi bụ otu ihe maka mmadụ niile, mana ị nwere ike họrọ isi ihe. Nhọrọ ndị bụ isi na-abụ ihe mmeghe ka i wee nwee ike chọpụta ihe ị nwere onyinye na mmasị na ya. Site na ahụmịhe gị, ị ga - enwe ike ịhọrọ usoro mmụta n'ọkwa nke abụọ.
O nwere ihe na-atọ gị ụtọ iche gbasara asụsụ n’onwe ya? Also nwekwara mmasị ịmara etu ihe si arụ ọrụ ma ọ bụ ọ masịrị gị ịga ụlọ nyocha iji nyocha ihe. Nhọrọ nke usoro nke ugbua asusu - sayensi bu ihe gi!
You gafeela afọ nke abụọ? Mgbe ahụ ị nwere ike ịmalite na ogo nke abụọ. Na nhọrọ mbu 2A Asụsụ oge a - sayensị bụ ezigbo agụmakwụkwọ izizi maka ọtụtụ ọmụmụ na ogo nke abụọ. Gaa! Can nwere ike ịga ụlọ akwụkwọ egwuregwu LO & Egwuregwu, Usoro eletriki en Electromechanics. Maka ihe ọmụmụ ndị ọzọ, biko gaa Mmuta Nkuzi.
Gaa ebe a na tebụl nke nhọrọ 2A Asụsụ Asụsụ Ọhụrụ-Sciences:
Tebụl mmụta 2A sayensị sayensị nke oge a